कमेडी च्याम्पियन – २ जितिसकेपछि भरतमणि के भन्छन् आफ्ना समर्थकहरुलाई ? (हे’र्नुहोस भिडियो सहित ) – Sadhaiko Khabar
कमेडी च्याम्पियन – २ जितिसकेपछि भरतमणि के भन्छन् आफ्ना समर्थकहरुलाई ? (हे’र्नुहोस भिडियो सहित )
प्रकाशित मिति: आइतबार, आश्विन ०३, २०७८ समय: १४:५१:०६
काठमाडौं / लोकप्रिय रियालिटी सो ‘कमेडी च्याम्पियन’ दोस्रो सिजनको फाइनलको उपाधि भरतमणिले जितेका छन् । अन्य दुइ जना कमेडीयन विक्की अग्रवाल र सन्तोष थापालाइ पछाडी पार्दै भरतमणिले उपाधि हात पारेका हुन् । पहिलो विजेताले २५ लाख रूपैयाँ र कार पाउने छन् भने दोस्रोले मोटरसाइकल र तेस्रोले स्कुटर पाउने छन्।
भरतमणी पौडेल विभिन्न नेता तथा कलाकारको क्यारिकेचर गरेर चर्चामा थिए । उनले पूर्व संचारमन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटा, राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण विडारी, पूर्व युवराज पारस शाह, सांसद योगेश भट्टराई, नेता राजेन्द्र महत्तो लगायतको क्यारिकेचर गरेर दर्शकको मन जितेका थिए ।
समसामयिक बिषयमा भरतमणीले गर्ने अभिनयले दर्शकलाई आकर्षित गरेको थियो । यसैले, अडिसनमा खासै चर्चामा नआएका भरतमणी उत्कृष्ट २४ बाट भने निरन्तर चर्चामा थिए ।
प्रशंसकदेखि कमेडी च्याम्पियनका निर्णायकहरूले भनिसकेका थिए कि, ‘कमेडी च्याम्पियन सिजन(२ जिते पनि नजिते पनि भरतमणिले बाजी मा’री सके।’ भरतमणिको क्षमता र चर्चा हेर्दा हो पनि।
भरतमणि सिजन(२ मा अरूमाथि हाबी भएका कलाकार थिए। उनी मिमिक्रीमा निपूण छन्। पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, पूर्व युवराज पारस शाह, घरबेटीजस्ता प्रस्तुति निकै रूचाइए।
यसमा उनको पूर्वअनुभवले पनि साथ दियो। ताप्लेजुङवासी उनी रेडियो तमोरमा ‘टेन्सन-फ्री’ कार्यक्रम चलाउँथे। यही कार्यक्रममार्फत उनले पूर्वाञ्चल हुँदै काठमाडौंसम्म आइपुग्ने आधार बनाएका हुन्। उनले भ’द्रगोल टेलिशृंखलामा समेत अभिनय गरेका छन्।
कमेडी च्याम्पियन(२ का निर्णायकमध्ये एक मनोज गजुरेलसँग लामो संगत गरेका उनीसँगै भरतमणिले रेडियो नेपालमा कायर्क्रमसमेत चलाएका थिए। यस्तै अनुभवले उनलाई कमेडी च्याम्पियनमा खारिएको प्रस्तुति दिन सक्षम बनाएको हो। पटक-पटक ‘पर्फमर अफ द शो’ बनेका उनी कमेडी च्याम्पियन बन्न सफल भए।
भरतमणि आफू स्ट्यान्ड अप कमेडीमा नै केन्द्रित हुने बताउँछन् । उनी, सामाजिक संजालमा टिप्पणी भए जस्तो आफूले मुख बङ्ग्याएर अभिनय नगरेको बताउँछन् । उनले भने–‘सबै कुरा क्यारिकेचरको मात्र होइन । मैले प्रस्तुत गरेका विषयलाई दर्शकले मन पराउनुभएको छ । मसँग पैसा छैन ।
तर, पनि देश तथा विदेशबाट मेरो प्रस्तुति मन पराएर दर्शकले भोट गरिदिनुभएको छ । मैले, उत्कृष्ट २४ मा पुगेपछि हरेक साता वेष्ट गर्ने कोशिश गरेको छु । कुनै साता मेरो प्रस्तुति तल त कहिले माथि भयो होला । तर, मैले एकनाशले सबै कार्यक्रममा उत्कृष्ट प्रस्तुति दिने कोशिश गरिरहेको छु ।’
पारस शाह बन्नका लागि भरतमणिले डेढ बर्ष अगाडि नै सोचेका थिए । तर, कुनै पनि पात्रको चरित्र निर्वाह गर्नका लागि पहिले आफूमा निपुणता आउनुपर्ने बुझेका भरतले कमेडी च्याम्पियनको स्टेज पाएपछि मौका गु’माउन चाहेनन् । उनले भने– ‘म एउटा राम्रो स्टेजको पर्खाइमा थिएँ । कमेडी च्याम्पियनको स्टेज भन्दा अर्को उत्कृष्ट ठाउँ नै थिएन । यसैले, यही स्टेजमा पारस शाहको अभिनय गरेको हुँ ।’ हे’र्नुहोस् भिडियो :-